Kwiminyaka yamuva, amadoda ashintshile kakhulu. Ukuba ngaphambi kokuba bekulungele ukuxhatshazwa ngenxa yamantombazana, ngoku namhlanje akusoloko ihlala kwindawo yebhasibhi inokubangela isondo esifanelekileyo, ngaphandle kokuba yena, ngokuqinisekileyo, uyintombi yakhe okanye unina.
Kwaye amadoda azinelisekile kwaye azikholose. Ngenxa yoko, umnxibelelwano akayena owokuqala.
Enyanisweni, abaninzi abafazi bayayichasa, besithi baqhelanise okokuqala, kuphela iindlela ezitshintshileyo kwaye zibulela ubuchwepheshe bwanamhlanje, iifom, skype, blogs, ii-ICQ kunye nezinye iintanethi zentlalo ziye zavela, oko kuthi, "ukudibanisa iintliziyo." Kule meko, kubalulekile ukuqikelela nokubala ukuba zihlandlo eziliphi ukukhohliswa kule ntanethi. Ucinga ukuba udibana nomntu omhle, kwaye umfana ufika entlanganisweni, ngokuqinisekileyo, kungekhona nanjengowesefoto akuthumele. Kwakhona, i-drawback enkulu kunye nolwazi olukhoyo kumpembelelo ekuphatheni komlingani kwilizwe lenene kunye neyona nto. Khawucinge ngenye imeko, kwi-ICQ okanye udibanisa naye, uyalala kuwe ngokuzwakalisa amazwi omnandi, kwaye ngokuqhelekileyo uziphatha njengomzimba woqobo, kwaye xa udibana-uyazibona phambi kwakho, inqabile, inkunzi engenakho ukuthetha amagama amabini. Kwaye emva kweemeko ezinjalo ucinga kanzima, ngaphambi kokuba ungeze kubangani bakho inkohliso enhle. Yintoni eseleyo ukuba amantombazana enze, kuba awufuni ukuba yedwa, kunye nokuba "nabani na." "Ngaba kuyafaneleka ukuba intombazana ikwazi ukuqala ukujwayelana? "- lo mbuzo imihla ngemihla kwaye ngakumbi ukhathazekile ngesondo esifanelekileyo. Kuyavela, kuyafaneleka. Ukuze ukuqinisekisile oku, sincoma udidi lwabafana abaqhelana nabo kuqala, kodwa akunakwenzeka ukuba uya kukukholisa. Emva koko sinikela inkcazo yamadoda enokubaluleka kokuqala ukuzibandakanya. Nangona yonke into ixhomekeka kwizinto zokuthanda nokukhetha ...
Ngoko, owokuqala udibanisa namadoda "avela kuRyan", unxibelelwano olungayi kukunika unonwabo olukhulu. Kubo kuyimfuneko ukumema kwi-venkile kufuphi nomnyango wokuphatha ngembewu okanye nge-shawarma, kunye nobhiya, nakanjani. Ukuze ufike kumdaniso kunye nabo unako ukufikelela kufuphi nomnyango, kumculo ovela kwifowuni yakho yeselula. Ngokuphathelele ubulili abafuni ukuthetha nonke, kodwa ukuba uyayazi: kungenzeka nakweyiphi na, nakwebhenki elifanayo. Yaye kungekhona nje ukuba nonke ningenakuyichasa umnqweno, ingxaki kukuba nguye lo mgangatho, ngenxa yokuba ukumema kwenye indawo, kufuneka uchithe imali. Ucinga ukuba "oku" akufanelekanga. Kwakhona lolu hlobo lwekhwele lukhwele kakhulu kwaye ibinzana elithi "kangangokuba ngeveki yezindlu akukho zihlobo zesini lesilisa" kubo kubalulekile. Kwaye kwenzeka ngenxa yokuba abaqinisekanga ngokwabo kwaye bayaqonda ukuba omnye umntu unokukunika okungakumbi.
Udidi lwesibini lwabafana abaya kuqala bayazikhuphela. Bachitha ixesha elininzi befunda ingqondo yengqondo yabasetyhini ukuze babe yikhohlisi yeklasi eliphezulu. I-Pikapery isebenzise kwabasetyhini izicwangciso zokufunda, izenzo ze-NLP, ukwenzela ukuba zibethe ngokukhawuleza ukuba zilale, ize zikhuphuke. Kwaye ukuba uyakwazi ukuqonda kakuhle oko, ngoko ukuba ngubani ngokwenene, unokufumanisa ukuba usebenzisa i-gestures kunye nesibonakaliso sobuso, ukwakha uxhulumaniso lwakho ngomgaqo "ezintathu" ewe, kwaye, ngokubalulekayo, uzalisekisa nayiphi na i-whim kwaye iphefumula Hlanganisa kunye nawe. Yonke le imigaqo yepopu, ngokungafani nendoda eqhelekileyo, eyaneleyo, akayi kuqonda ulwazi malunga nawe njengolonwabo kwaye kubalulekile, ngokubanzi akayidingi, kodwa uya kwenza ngathi unomdla kuye njengomntu. Unokuyichitha ngeengxoxo ezingenangqiqo, zithi uyiinkedama okanye ugule ukufa, emva kokuba umntu onjalo alahlekelwa ngumnqweno wokukuhleka usulu, "ekubeni ubomi sele buhlekile," uya kucinga.
Ekugqibeleni, ukuthabatha kunokuba ngumntu omhle, kodwa nje ungacingi ukuba unokutshintsha. Ngombulelo kwiikhosi kunye nokusebenza kwakhe, udoda waba yinto enjengeenja zenkonzo, apho nayiphi na imeko ifezekisa umsebenzi wayo. Musa ukucinga ukuba unethamsanqa, kwaye uya kuba yinto ehlukile.
Uhlobo olulandelayo "ulutsha lwasegolide", olufuna ukutshisa kunye nokubonakala. Musa ukuvuyela kwangaphambili, abaqhubeki malunga namantombazana abo. Ngoko ungalindeli izipho ezithandekayo okanye inkxaso yenyama. Kubo, uyintombazana ngobusuku obunye, kwaye ukuba unethamsanqa, emva kweveki. Emva koko uya kudana.
Sihlolisise iindidi eziphambili zamadoda aqala ukuziqhelanisa. Kukho ezininzi iiprospecies, phakathi kwazo zikho, zizinto ezilungileyo, kodwa kwiimeko ezininzi, mhlawumbi ziyimfihlelo, zikhulayo, zikhulile, okanye ...
Abafana abaseleyo baqhelana nokuziqhelanisa namantombazana ngenxa yomsebenzi abawenzayo ebomini kwaye bakholelwa ukuba impumelelo kwimisebenzi yabo impumelelo ebomini babo; nokuba ngaba bafunde kakuhle kwaye banokuthobeka, ngelixa bona ngokwabo bahlaselwa yintloni; okanye abanokungaqiniseki, abafana abanokuzibandakanya, okwenene, sele bekhona ngomhla wesibini kuya kuba ngumntu onentlalontle novuyo, kuthatha ixesha.
Musa ukwesaba ukuba aba bantu baqhelani kuqala, uyazibona ukuba bayakwenza ngenxa yezizathu ezingabandakanyekanga nonke. Yaye ukuba uqala ukucinga malunga nokuba abafana basadingeka ukuthatha amanyathelo okuqala, ulindele omnye umntu ukusuka kwisiqendu esingentla. Okukhethiweyo kukukho.
Qinisekisa into oyifunayo uze uqale ukukhangela. Emva koko, akuyiyo imfihlo ukuba umntu oqhelekileyo usafuna ukukhangela, kwaye ufumane-ukuza kuqala. Oku, akuyi kuba lula, kodwa, njengoko wonke umntu uyazi, kukho "inkokhelo" kuyo yonke indoda, oku akubandakanyi amadoda angabesifazana, alungele "ukuncedisa" ngaphandle kwekhonkco, ekuboneni kuphela intonga yokuloba.
Amadoda amaninzi aqhelekanga akakwazi ukukhanyela ibhinqa elifuna uncedo. Ngoko ke, kufuneka usebenzise oku. Ngokomzekelo, isithende sakho sephukile, kwaye usenayo ikhwama enzima. Ewe, indoda enokuhlonipha ingafuni njani ukubuyisela ekhaya intombazana eyayisenkingeni? !!
Into ephambili kwiimeko ezinjalo kukuba uqale ukwenza, kwaye ungabi neentloni ngomgaqo othi "Ndiyithatha isinyathelo esazandleni zam - qhelana kuqala! "U
Iintlobo zabantu malunga nokuphila
Yintoni enokuyenza ukuba iimvakalelo zomntu ziyabanda
Senza i-puppet yasekhaya
Indlela yokulahla amaje?
Kutheni sifuna ukutshintsha othandekayo?